Makwikwi Matemu - Game Point - Bhodhi Mitambo uye Vhidhiyo Mitambo
Yedu makwikwi mitemo uye mamiriro
Semushandisi weiyo portal yekuvaraidza Spielpunkt - mitambo uye varaidzo tinopa vaverengi vedu mikana yekutora chikamu mumakwikwi nguva nenguva.
Pakusarudza makambani anobatira pamwe nesu, tinocherekedza kukomba uye kururamisira. Sweepstakes kubva kumisoro yemitambo yebhodhi, mitambo uye hardware, zviitiko, mabhuku pamwe nemafirimu uye akatevedzana anoshandira vaverengi vedu chete sekukosha kwakawedzerwa kune yedu yekudhirowa inopa.
Isu hatifarire "data capture", uye hatidi kumanikidza vashanyi vewebhusaiti yedu mukudyidzana kwavasingazoite nehana yakachena pasina kutora chikamu mune mamwe emakwikwi edu.
Zvechokwadi, isu tichiri kufara pamusoro pekubatana kwega kwega, kwatinoona sekukoshesa basa redu.
Kuti tiite kuti makwikwi edu ave pachena, akarurama uye ari pamutemo, tinokumbira vatori vechikamu kuti vaverenge zvinotevera makwikwi mitemo uye mamiriro nokungwarira. Kana uchine mibvunzo, tapota usazeza kutibata nesu.
Mamiriro ezvinhu ekutora chikamu
Kutora chikamu mumakwikwi kubva kuSpielpunkt - Brettspiele und Gaming, inozonzi mushandisi kana murongi, inogara isingabhadharwi uye yakavakirwa pane aya mamiriro ekutora chikamu.
Vatori vechikamu vanogona kuwana nguva yemakwikwi mukutsanangurwa kwakasiyana kwemakwikwi. Mukati menguva dzakatarwa, vashandisi vanopihwa mukana wekutora chikamu mumakwikwi emahara online.
Kuti utore chikamu mune imwe yemakwikwi, zvinodikanwa kuita chiito chinodiwa mukutsanangurwa kwemakwikwi. Kutora chikamu kunogoneka chete mukati menguva yekutora chikamu. Zvikumbiro zvakagamuchirwa mushure mezuva rekuvhara hazvizotariswe pakudhirowa.
Chiito chimwe chete chaitwa pamunhu wese ndicho chinotarisirwa kuona akunda.
Vanokodzera vanhu chaivo vane nzvimbo yavo yekugara muFederal Republic yeGermany, Austria kana Switzerland uye vasvika zera re14.
Kutora chikamu hakugumiri kune vatengi veanoronga uye hazvinei nekutenga kwezvinhu kana masevhisi.
Kana mukwikwidzi akarambidzwa munzvimbo yake yepamutemo, mvumo yemumiriri wake wezvemitemo inodiwa.
Vese vanhu uye vashandi veanoshanda vanobatanidzwa mukugadzirwa uye kuitiswa kwemakwikwi, pamwe nenhengo dzemhuri yavo, havana kukodzera kutora chikamu mumakwikwi. Uye zvakare, iye anoshanda anochengetera kodzero yekubvisa vanhu kubva mukutora chikamu mukufunga kwavo kana paine zvikonzero zviri pamutemo, semuenzaniso (1) muchiitiko chekunyengedza maererano nekuwana kana kushandiswa kwemakwikwi, (2) kana pane kukanganisa kwemamiriro ezvinhu ekutora chikamu, (3) kana chiitiko chisina kunaka kana (4) pakaitika mashoko enhema kana anotsausa ane chokuita nokupinda mumakwikwi.
Vanokunda vanozotemerwa mushure mezuva rekuvhara sechikamu cheraffle raffle pakati pevose vatori vechikamu.
Chenjerera: Kana kukwikwidza kwakabatana nebasa, avo chete vatori vechikamu vakaita basa nemazvo ndivo vachapinzwa muraffle.
Vanokunda mubairo vachaziviswa nekukurumidza nezvemubairo kuburikidza neemail yakasiyana kana meseji yekukurumidza pasocial media. Mubairo uchatumirwa kune anenge akunda chete kana kumumiriri wepamutemo weakakunda mudiki. Kutsinhana, kuunganidzwa nemutengi uye kubhadhara mari yemubairo hazvigoneke.
Chero mari yekutumira mukati meGermany ichatakurwa nemushandisi. Kuwedzera mari ine chekuita nekutora mubairo ichatakurwa nemukundi. Iye anokunda ndiye ane mhosva yechero mutero wepurofiti.
Kana muhwina akasapindura mukati memazuva gumi nemana mushure mekukumbirwa kudaro, mubairo unogona kuendeswa kune mumwe mubairo.
Murongi anochengetera kodzero yekupedza makwikwi pasina chiziviso uye pasina kupa zvikonzero.
Izvi zvinonyanya kushanda kune chero chikonzero chingakanganisa kana kudzivirira makwikwi kumhanya maererano nehurongwa.
Kuti utore chikamu mumakwikwi, zvinodikanwa kuti upe rako data. Iye anotora chikamu anovimbisa kuti ruzivo rwega rwunopihwa naiye, kunyanya zita rekutanga, surname uye email kero, ndeyechokwadi uye nderechokwadi.
Murongi anonongedza kuti data rese remunhu ari kutora chikamu harizopfuudzwa kune vechitatu mapato kana kuitwa kuti riwanikwe kwavari kuti rishandiswe pasina mvumo. Murongi anogona kushandisa kero dzeemail dzakanyoreswa kutumira tsamba dzenhau uye odziisa mutsamba yetsamba yeSpielpunkt.net nharaunda. (Cherechedza: usazvinetse, isu zvakare tinovenga SPAM uye tinotumira akawandisa emabhuku matatu kune vedu vanyoreri pamwedzi),
Kana paine kuhwina, uyo anokunda anobvuma kutsikiswa kwezita rake uye nzvimbo yekugara mune yekushambadzira midhiya inoshandiswa nemurongi. Izvi zvinosanganisira kuziviswa kwemunhu anokunda pawebhusaiti yeanoshanda uye mapuratifomu enhau.
Mutori wechikamu anogona kukanzura mvumo yake yakaziviswa chero nguva. Kubvisirwa kwacho kunofanirwa kutumirwa nekunyora kune anoronga zvemadhijitari munzvimbo yakadhindwa. Mushure mekukanzura mvumo, iyo data yakaunganidzwa uye yakachengetwa yemunhu anenge atora chikamu inobviswa ipapo ipapo.
Kukwidziridzwa uku hakuna kana chekuita neFacebook uye hakuna nzira yakatsigirwa, yakatsigirwa kana kurongeka neFacebook.
Kukwidziridzwa uku hakuna hukama ne Twitter uye hakuna kutsigirwa, kutsigirwa kana kurongwa ne Twitter.
Mibvunzo kana zvichemo zvine chekuita nemakwikwi zvinofanirwa kunangidzirwa kumushandisi.
Makwikwi evashandisi anoenderana chete nemutemo weFederal Republic yeGerman. Sarudzo yevatongi ndeyekupedzisira.
Kana chero gadziriro yezvisungo zvekutora chikamu ikave kana kusashanda zvachose kana kuti chikamu, izvi hazvizokanganisa kuve kwechokwadi kwezvisungo zvekutora chikamu.
Panzvimbo pechipo chisingabatsiri, mutemo unobvumirwa nemutemo unoshanda uyo unouya pedyo sezvinobvira mumashoko ehupfumi kune zvinoreva uye chinangwa chinoratidzwa muurongwa husina kushanda. Izvi zvinoshandawo kana paine mukaha mumamiriro ezvinhu aya ekutora chikamu.
Tinogona kufara kana iwe ukatitumira mapikicha kana makomendi mushure mekugamuchira mubairo wako.
Tinoshuvira vose vatori vechikamu rombo rakanaka.